‘बिरानो माया’ कस्तो होला ? « Mazzako Online
‘बिरानो माया’ कस्तो होला ?
मज्जाको अनलाईन, असार १ गते, मंगलबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
‘बिरानो माया’….यही शिर्षकमा चलचित्र बन्ने भएको छ । सोमबार विहान कमलादी स्थित गणेश मन्दिरमा चलचित्रको शुभ मुहूर्त गरिएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा बन्न लागको यस चलचित्रलाई माधव खरेलले निर्देशन गर्नेछन् । चलचित्रको स्क्रिप्ट पनि उनी स्वयंले नै तयार पारेका हुन् ।
श्री मिडिया सर्च एण्ड मुभि मेकर प्रा.लिको व्यानरमा निर्माण हुनलागेको चलचित्र ‘बिरानो माया’मा दिनेश डि.सि., श्रीदेव भट्टराई, नम्रता सापकोटा, रोहित रुम्बा, दिपसा बि.सि., राजु बजाज, तिलक कट्टेल, सुरविर पण्डित लगायतका कलकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
मिलन लामा र सावित्रि अधिकारीको संयुक्त निर्माणमा बन्न लागेको यस चलचित्रमा क्रिएटिभ/काष्टिङ् निर्देशक शान्तिप्रिय रहेका छन् । चलचित्रमा अनिल विरहि र सरोज प्याकुरेलको संगीत, शंकर महर्जनको द्वन्द्व, रुपेश उप्रेतीको नृत्य निर्देशन रहनेछ ।
जेठको पहिलो साताबाट फ्लोमा जाने यस चलचित्रको छायाँकन काठमाण्डौ वरपरका विभिन्न ठाउँहरु, झापा र इलाममा गरिनेछ । कार्यक्रममा दिनेश डि.सि., शान्तिप्रिय लगायतले चलचित्रलाई शुभकामना दिएका थिए ।